MUUQAAL+FALANQEYN: Puntland miyey ku biirtay Maamulada Xulafada la ah DF Soomaaliya,Maxaase isbedelay? – Puntlandtimes
MUUQAAL+FALANQEYN: Puntland miyey ku biirtay Maamulada Xulafada la ah DF Soomaaliya,Maxaase isbedelay?
GAROOWE(P-TIMES)- Si weyn ayaa laysku weydiinayaa mawqifka dawladda Puntland waxa iska bedelay, ka dib markii uu xalay soo dhamaaday shir ay si gaar ah u lahaayeen maamulada Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Puntland, kaas oo laga soo saaray warsaxaafadeed siyaaadeed.
Labada maamul ee kala ah Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle, labadaba waxaa gacanta ku haysa Xukuumadda Faderaalka ee Soomaaliya, waxaana saameyn badan go`aamadeeda ku leh Xukuumadda dhexe oo mar kasta u aragta in ay iyadu leedahay saameyntooda.
Meesha waxa isugu yimi Dawlada Dhexe oo wadata Saddex maamul oo Labo Sharci yihiin oo loo Aqoonsanyahay maamulo federaalka ka tirsan iyo Gobolka Banaadir,marka arrintu sidaa tahay way ka duwanayd sidii hore u dhici jirtay oo Maamulada oo midaysani Dawladda kasoo hor jeesan jireen.
Midda kale ee Xusidda Mudan waxay tahay in Puntland Ku hungowday labadii maamul ee ay jaalka ama xulafada ahaayeen oo ay Dawladda kula Challenge garayn lahayd ee ay is-lahayd jeebka ayay idiinku jiraan oo Madaxda labadaa maamul iyo Dawladda dhexe ayay dooddu u dhexeysay oo Miiska u garaacay madaxda Nabad iyo Nolol.
Waxa lays weydiinayaa
-Puntland miyaa lagaga adkaaday Siyaasaddii oo waxa soo gabagabeeyay doorkeedii hogaamineed maamuladii oo Labo dawladu wadato,labona ka fallaagoobeen oo danahoodii garteen?.
-Mise hoos bay ula heshiisay N&N oo iyadaa Ku wacad furtay Saaxiibadeed iyadoo Daneheeda eeganaysa oo Ballamo ayaa loo sameeyay?.
-Ma Hogaanka Cusub ee Puntland baa jilicsan oo Ka duwan madaxdii hore ee Puntland Faroole iyo Gaas?,Mise wuu ka waddanisan yahay kuwaa hore oo wuxu u tanaasulay Maslaxadda Dalkiisa Soomaaliya?.
-Oo haddana waxa yaab noqonaysa oo sowtan weli qaylinaysa ee ka hor imaanaysa War kasta oo Federaalku soo saaro oo ay ugu dambeysa Sharcigii Cashuuraha ee Wasiirka Maaliyada Bayle u gudbiyay Baarlamaanka!
In laga adkaaday oo ay hogaansantay bay u eegtahay.
Sidaasaa Harumarku Ku jiraa in Dawlada dhexe Maamuladeedu Hoos yimaadaan oo U hogaansamaan Awaamiirteeda.
An kuu sheegee puntlaan waligeed cadkeedu waa banaanka oo shaki iyo muran kuma jiro.Tan kale shirkii garoowe puntlaan baa gogosha dhigtay oo ay ujeedadu ahayd in ay wax meel isla dhigaan maamul gobaleedyada iyo maamulka jilicsan ee xamar laga sheego.Hase ahaatee waxaa soo baxday oo la helay in ay qolada xamar ka timid ay wateen qorshe yaal kale oo aysan marna aqbali karin maamul gobaleedyadu.Waana tan keentay in lagu kala boodu shirkii ayadoo an wax natiijo ah la kala gaarin.Calaa kulli xaal reer puntlaan mar horay soo ogaadeen in aysan xamar dan u hayn oo aysana ayana isku halaynayn.Sida la sheego puntlaan wax agab ah kama hesho xamar iskuna halayn mayso oo qorshaheedu wuu u jaan go’an yahay.Xamar waxay dhaqaalo siisaa baa la yiri gobalada beesha USC kaliya.Saas darteed reer puntlaan dhiilo uma diyaarsan Risqi xamar ka yimaada.
Calaa kulli xaal shirkii garoowe ee fashilmay hala arko kuu u daran yahay.
WAAR SACAD ma sidaasay kula tahay, haddaad rag wax la qaybsan karayso maxaad goonida ugu carartay maad golaha joogtid,meesha waxa isugu yimid shan maamul goboleed, G banaadir iyo Villla Muqdisho, koox walibana dano iyo siyaasad ayay wadatay, ugu dambayna nin waliba dantiisuu raacday, miyaadan arag in Hirshabeele iyo K galbeed Puntland ku raaceen in laga horyimaado sharcigii canshuuraha ee N & N baarlamaanka horgeeyeen, bahasha nin waliba siduu yaqaan buu u nciyaaray, PUNTLANDNA guulo badan bay ka gaartay shirkaas adigoo kalese ma garan karo, waayo? awoowgaaba ma garan jirin.
Sacad si wacan ayaad uga hadahay una abaadhay. Magaratadu markay waxay sheegaan waayaan ayay aflagaaddo iyo awoowe qabiil ku meeraystaan.
Meesha waxa isugu yimi Saddex Maamul oo Dawladdu wadato iyo Saddex Maamul oo Kale ayaan u jeeday.
Waa hagaag Sxb waynu jeedaalin doonaa halka arrini Ku dambeyso,waanaad Ku mahadsantahay Fikirkaaga bilaa turxaanta ah.
Shan maamul iyo federaal ayaa meelkasta lala taagan yahay. Awaay maamulkii lixaad. Mise ma waxaa la aqbalay sheekadii sida raqiiska ah ku bilaabmatay ee somalia iyo somaliland. Quud aan jirin ayaa qoryo loo guranayaa. Halkee buu ka jiraa wadanka la yiraahdo somalia halkee buuse ku wajahan yahay. Waa wax caqliga saliimka ah ka fog in somaliland wadanka barkiis goosato oo markaas puntland xamar laga xukumo. Cidii taas ku riyoonaysay hurdada culus ka toosa. Ugu yaraan 7 wadan ayey somalia dhalin hadii kala go’u bilowdo. Xaqiiqada dhabta ah ee lamagafaanka ah waa taas. Sida kaliya ee kala go’a somaliya lagu baajin karo waa in maamulada kale ay ayan ku hanjabaan in ay go’in hadii somaliland go’do. Dunidu diyaar uma aha in 7 wadan iyo ka badan somalia dhasho